Soo dejisan Movavi Video Editor 15.4.1 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahintaMovavi Video Editor
Bogga rasmiga ah: Movavi Video Editor
Movavi Video Editor – software aad u fiican in la files video shaqeeyaan. software waxa uu leeyahay tiro balaadhan oo ah qalab kala duwan, filtarrada iyo saamaynta ay u dhamaystiraan processing video. Movavi Video Editor u saamaxaaya in ay dar files dhawaaqa in video ah, Cudarada subtitles ah, gooyaa ama u ogolow video ah oo aan laga badinin tayada. software waa ay awoodaan in ay video iyo qabashada audio ka dhigi laga qalabka la xiriira computer ama ilo kale. Movavi Video Editor kuu ogolaanayaa inaad dhoofin natiijada shaqada sida video ee qalabka mobile, dukaanka in audio ama video qaabab loo baahan yahay iyo daabacaan on adeegyada kala duwan video.
set ee filtarrada iyo saamaynta falanqeeyo video
Ku darista ee Cinwaan iyo soundtracks
Qabsashada ee goobaha video
Lacag of files qaabab warbaahinta loo baahdo
Soo dejisan Movavi Video Editor
Faallo ku saabsan Movavi Video Editor
Movavi Video Editor Xirfadaha la xiriira